Baglọ Ngwá Ọrụ Uwe | China uwe akpa Manufacturers, Suppliers
China na-abụghị kpara uwe akpa emepụta uwe n'echebe akpa na logo
Adịghị elu mma mere si na-abụghị kpara polypropylene ihe onwunwe, 100% Eco-Enyi na Enyi & Recyclable
Zuru oke maka nchekwa ma ọ bụ nzukọ maka akpụkpọ anụ, ajị anụ, akwa, akwa, na akwa.
Ihe na-egbu ume na acid-enweghị nchekwa maka ogologo oge - na-echebe site na ebu
White uwe akpa nwoke uwe cover akpa, foldable uwe akpa maka uwe
Ihe: Nke mebere ya na akwa na-enweghị akwa, dabara adaba maka ịchekwa yana nyocha. Size: Customized (L * W * H)
Na-echebe uwe: Na-echebe uwe megide unyi, uzuzu, na nla, na-eme ka uwe dị ọcha.
Ihe eji eme mkpọchi uwe: Jiri mkpịsị ogologo, dị mfe ịhọrọ, ma debe uwe. Portable: Nnukwu ikike, dị oke mkpa, nlekọta dị mma maka uwe.
factory price NO MOQ uwe akpa na akpa, ahaziri uwe bag uwe agbamakwụkwọ akpa
Ogologo Uwe Uwe Ochie: Uwe uwe ndị a maka ogologo uwe na-eji akwa 100GSM na-enweghị akwa acid na-egbu ume. Chedo uwe gị si na nla na ájá, Dowe uwe na-eku ume na ịdị ọcha na akpa akwa, akwa akwa, ma ọ bụ ebe nchekwa nchekwa.
Window doro anya: windo doro anya na-ewepụ echiche nke ịgbalị ịchọpụta ihe dị n'ime akpa uwe 60-anụ ọhịa. Ihe eji eji kaadi Plastics ID nke akpa uwe maka nkpado aha ma obu kaadi njirimara. Na-adaba adaba ma na-echekwa oge.
Owu kanvas uwe akpa na logo
1. Ahụ Ike Anụ Ahụ Na-adịgide Adịgide
2. Ejiji ejiji
3. Abù washable
4. já-free nchekwa
5. Mkpọchi siri ike